Ahoana ny fakana sary amin'ny iPhone X: ny fomba mora! - Iphone
efijery mikasika tsy miasa amin'ny iphone 6
iphone manapaka mandritra ny antso
Ahoana ny fakana sary amin'ny iPhone X: ny fomba mora!
Te haka pikantsary amin'ny iPhone X ianao, saingy tsy azonao antoka ny fomba. Amin'ny maodelin'ny iPhone taloha, mila mampiasa ny bokotra Home ianao haka fakantsary - fa ny bokotra Home kosa nesorina tamin'ny iPhone X! Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fakana sary amin'ny iPhone X fomba roa samy hafa !
Ahoana ny fakana sary amin'ny iPhone X
Maka sary amin'ny iPhone X, tsindrio miaraka ny bokotra Side amin'ny ilany ankavanan'ny iPhone sy ny bokotra miakatra . Hiseho fotsy ny seho an'ny iPhone anao hanondroana fa nalaina ny pikantsary ary ho hitanao ny topi-maso ny pikantsary amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery.
Ahoana ny fakana sary amin'ny iPhone X amin'ny fampiasana assistiveTouch
Raha tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny bokotra Side na ny bokotra volume up dia azonao atao ny mampiasa ny HelpiveTouch haka pikantsary amin'ny iPhone X. Voalohany, kitiho ny assistiveTouch ao amin'ny fampiharana Settings amin'ny alàlan'ny fanoratana General -> Azo idirana -> assistiveTouch ary manodina ny switch eo akaikin'ny assistiveTouch.
Raha maka sary amin'ny iPhone X mampiasa AssistiveTouch, kitiho ny bokotra virtoaly izay niseho taorian'ny namelanao ny assistiveTouch. Manaraka, tap Fitaovana -> Bebe kokoa -> Pikantsary haka pikantsary amin'ny iPhone X. Ny efijery dia hiseho fotsy ary ho hitanao ny baravarankely fijerena eo amin'ny zoro ambany ankavia amin'ny efijery.
Azoko atao ve ny manitsy ny pikantsary iPhone X-ko?
Eny, azonao atao ny manova ny pikantsary iPhone X amin'ny alàlan'ny fanindriana ny topi-maso kely izay miseho eo amin'ny zoro ambany ankavia amin'ny efijery aorian'ny fakana pikantsary. Rehefa manao izany ianao dia hahita fitaovana fanamarihana marobe azonao ampiasaina hanitsiana ny pikantsary! Raha vantany vao nanitsy ny pikantsarinao iPhone X ianao dia tap hatao eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny fampirantiana.
Aiza no hahazoana famonjena ny pikantsary iPhone X-ko?
Ny pikantsarinao iPhone X dia voatahiry ao amin'ny app Photos.
Manam-pahaizana momba ny pikantsary ianao!
Nahavita pikantsary iPhone X ianao ary manam-pahaizana momba izany amin'ny fomba ofisialy. Fantatrao izao ny fomba fakana sary amin'ny iPhone X, alao antoka fa hizara ny fahalalanao amin'ny namanao sy ny fianakavianao amin'ny media sosialy! Aza misalasala mamela anay hevitra etsy ambany raha manana fanontaniana hafa momba ny iPhone X.